टाइटानिक (१९९७ चलचित्र) Info. About. What's This?
ⓘ टाइटानिक (१९९७ चलचित्र)
टाइटानिक सन् १९९७ मा बनेको अमेरिकी चलचित्र हो । ह्वाइट स्टार लाईन कम्पनीले त्यस समयको सवैभन्दा विशाल एवम प्रविधियुक्त जहाज टाइटानिक को निर्माण गरेको थियो । जुन विभिन्न परीक्षणपछि २२२४ मान्छे बोकेर पहिलो औपचारिक यात्रामा बेलायतदेखि अमेरिका गइरहदा न्युयोर्क नजीकै विशाल हिम टुक्रा सँग ठोक्किन पुगि डुवेको थियो । यस दुर्घटनामा १५१४ यात्रुले ज्यान गुमाएका थिए ।
यहि दुर्घटनामा आधारित विभिन्न फिल्म हरू वनेका छन । जेम्स क्यामेरनद्वारा निर्देशित टाइटानिक फिल्म यस मध्य अग्रपन्ग्तिमा आउछ । उत्कृष्ट फिल्म, निर्देशन, छायाङ्कन र सम्पादनसहित ११ वटा ओस्कार अवार्ड जित्न सफल टाइटानिकले जहाज डुब्दाको त्रासदीमात्र होइन तत्कालीन बेलायती अमेरिकी समाजमा रहेको वर्गीय विभेदलाई पनि कैद गरेको छ । दुर्घटनाको शतवार्शिकिको अवसरमा सन् २०१२ मा यो फिल्मको ३डि संस्करण पुन: वजारमा आएको छ । दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमा थर्ड क्लास यात्रु बढी थिए । निर्देशक क्यामेरनले फिल्ममार्फत् बढी सहानुभूति तिनै यात्रूप्रति पोखेको पाइन्छ । उनले फिल्मका लागि संगीतकार जेम्स हर्नरलाई आयरल्यान्डको लोकगीतमा आधारित भई गीत कम्पोज गर्न लगाएका थिए । थर्ड क्लासमा यात्रा गर्ने धेरैजसो आइरिस नागरिक थिए ।
3. बक्स अफिस सफलता
अकुत आम्दानी टाइटानिक फिल्म ३ घन्टा १४ मिनेट लामो छ । निर्माण कम्पनी पारामाउन्ट पिक्चर्स् र ट्वेन्टिथ सेन्चुरी फक्सले निर्देशक क्यामेरनलाई फिल्मको लम्बाई दुई घन्टामा सीमित गर्न सुझाव दिएका थिए । दैनिक प्रदर्शनी संख्या घट्ने डर थियो निर्मातालाई तर, क्यामेरनले फिल्म छोट्याएनन् । बरु, फिल्म धेरै हलमा आधा रातमा सुरु भएर बिहान ३ बजेसम्म चलिरहयो । एक अर्ब डलर कारोबार गर्ने पहिलो फिल्मको रेकर्ड यसले राख्यो । यसको कमाइ अहिलेसम्म दुई अर्ब नाघिसकेको छ । सन् १९९७ मा फिल्म रिलिज भएदेखि १६ हप्तासम्म बक्सअफिसको पहिलो स्थानमा रहयो । फिल्मको गीति एल्बम अहिलेसम्मकै सर्वाधिक बिक्ने फिल्मी गीत बनेको छ भने यसको निर्माण सम्बन्धी लेखिएको किताब न्युयोर्क टाइम्सको बेस्ट सेलर सूचीको पहिलो नम्बरमा थियो ।
मेक्सिकोमा सेट मजदुरको ज्याला सस्तो पर्ने हुनाले टाइटानिक खिच्न क्यालिफोर्नियादेखि नजीकै रहेको मेक्सिकोको सान्ता रोसारितो भन्ने ठाउँको समुद्री किनारमा सेट बनाइएको थियो । फिल्म निर्माण कम्पनी ट्वेन्टिथ सेन्चुरी फक्सले त्यहाँ १ लाख ६२ वर्गमिटर जग्गा किनेको थियो । सेटमा नक्कली टाइटानिक जहाज सक्कली ८८२ फिटभन्दा १० प्रतिशत सानो ७७५ फिट लामो बनाइएको थियो । १० तल्ला अग्लो सेट बनाउन कम्पनीले २ करोड ४० लाख डलर खर्च गर्‍यो । नक्कली जहाज एकपट्टिको भाग मात्र बनाइएको थियो । अर्कोपट्टिको भाग जमीनसँग जोडिएको थियो । जहाजको तीनतिर मात्र पानी थियो । जहाज बनाउन प्रयोग गरिएको १६२ फिट अग्लो त्रे्कनबाट पछि फिल्म खिचिएको थियो । क्यामेरा गुडाउन ६०० फिट लामो ट्रयाकको व्यवस्था गरिएको थियो। सेटमा दुइटा पोखरी बनाइएको थियो, एउटा ८०० फिट लामो र ९० फिट गहिरो, ६ करोड ४३ लाख लिटर पानी भएको र अर्को ३० फिट गहिरो, १ करोड ९० लाख लिटर पानीवाला । पानी सिधै समुन्द्रबाट ल्याइन्थ्यो । जहाजमाथि ६५ फिट अग्ला चारवटा चिम्नी ठड्याइएको थियो ।
फ्लिप गरिएको दृश्य एकपट्टि मात्र जहाज बनेकोले कतिपय दृश्यलाई स्त्रि्कप्टभन्दा उल्टो दायाँतिर हिँड्नुपर्ने मान्छेलाई देब्रेतिर हिँड्न लगाई खिचेर पोस्ट प्रोडक्सनमा फर्काइएको फ्लिप गरिएको थियो । जमीनसँग जोडिएकोले जहाज चलायमान थिएन। चिम्नीबाट निस्किएको धुवाँ हावाको गलत दिशाले सोचेभन्दा विपरीत उड्दाखेरि पनि निर्देशकले यो चलाखी देखाएका थिए ।
पानीमुनि अनुसन्धान फिल्मको फाइनल स्त्रि्कप्ट लेख्नुअघि जेम्स क्यामेरनले ३ हजार ७ सय मिटरको गहिराइमा रहेको टाइटानिकको भग्नावशेष १२ पटक अवलोकन गरेका थिए । त्यतिबेला फुटेज सङ्कलन गरिए पनि स्तरीय नभएकोले भग्नावशेष दृश्य सेट लगाएर खिचिएको थियो । जहाजको डिजाइन गर्डन लिन्च र केन मार्सचालले दिएका सूचनालाई आधार बनाइएको थियो । जीवनभर टाइटानिकको अध्ययन अनुसन्धान गरेका डन पहिलोपटक सेटमा बनेको जहाजमा पुग्दा स्तब्ध भएका थिए । त्यस्तै टाइटानिकका आधिकारिक चित्रहरू बनाएर कहलिएका केनकै चित्रका आधारमा स्पेसल इफेक्ट खिचिएको थियो । फस्ट क्लासमा यात्रा गर्ने अभिजात वर्गका मान्छेको हाउभाउ र बोलीचाली कलाकारलाई सिकाउन विज्ञहरू उपलब्ध थिए ।
Wikipedia: टाइटानिक (१९९७ चलचित्र)